China Lab-eji Disc-ụdị ugboelu na nkume igwe nri QDB-50 QDB-100 QDB-150 factory na-emepụta | Qiangdi
Jet Mill na-eji na ụlọ nyocha, onye ụkpụrụ bụ: Chụpụrụ site na abịakọrọ ikuku site na udia injectors ， akụrụngwa na-accelerated na ultrasonic ọsọ na agbara ndi na-egwe ọka n'ime ulo ke tangential direction, collided na Mike n'ime urughuru.
Jet Mill eji na ụlọ nyocha, onye ụkpụrụ bụ: Chụpụrụ site abịakọrọ ikuku site udia injectors ， akụrụngwa na-accelerated ka ultrasonic ọsọ na agbara ndi na-egwe ọka n'ime ulo na tangential direction, collided na Mike n'ime urughuru. Na urughuru size nwere ike na-achịkwa site ukpụhọde longitudinal omimi, -egwe ọka nsogbu na ihe onwunwe nri ọsọ. Cdị Jet Mill na-arụ ọrụ dị mma maka ihe ndị na-adọrọ adọrọ.
1.Obere ogbe mmepụta ihe nke ụlọ nyocha, na-eji ihe desktọọpụ.
2.The ike mmepụta bụ 50-300g ogbe, ihe bụ ihe ọzọ, ọ nwere ike iru 300-1000g ogbe, ọbụna 3-5kg ogbe mgbe na-agbanwe imewe nke collection ngwaọrụ. ihemgbanwe imewe kpamkpam na-ezere ụdị ụdị igwe dị iche iche.
3.Adopt mfe ichikota akpa mode iji chekwaa ego.
4.Se Ọtụtụ oge egweri iji nweta ihe a chọrọ.
Ọ na-ebe-etinyere superfine pulverizing maka nonmetallic ores, chemical nkà mmụta banyere ígwè, n'ebe ọdịda anyanwụ ọgwụ, ọdịnala Chinese na nkà mmụta ọgwụ, ugbo chemical na ceramik, kwesịrị ekwesị na-eji na ụlọ nyocha.
nlereanya Ihe nkwalite Ikuku ikuku Ike Gri egweri
QDB -50 0.075 0.25m / nkeji ogbe 2 ~ 60g D97,5 ~ 40um
QDB-100 Ugboro abụọ 0.8m / nkeji ogbe 50 ~ 300g D97,5 ~ 40um
ogbe 300 ~ 1000g
ogbe 1 ~ 5kg
QDB-150 0.4 2mmin 10 ~ 20kg / awa D97,5 ~ 4Oum
QDB-200 1 4m% min 20 ~ 50kg / awa D97,5 ~ 4Oum
QDB-350 2.2 8m3min 50 ~ 120kg / awa D97,5 ~ 40um
Nke gara aga: High ekweghị ekwe Akụrụngwa Jet Mill
Osote: -Lọ nyocha na-eji akwa akwa Jet Mill maka 1-10kg ikike